Achawlaymyar - News and Media
စာက ရိုင်းကောင်းရိုင်းပါလိမ့်မယ် မတတ်နိုင်ပါဘူး “မယားငယ်” တဲ့
June 30, 2022 by Achawlaymyar
အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ အႀကီးရွိလို႔ အငယ္ျဖစ္တာလား ငယ္ငယ္ေလးမို႔ ေခၚတာလား စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ မယားငယ္ ဘာလို႔ျဖစ္ရလဲ ေတြးၾကည့္မိတယ္ ပထမဆုံးအခ်က္က အကုသိုလ္ဝဋ္ေႂကြးပါလို႔ပါ ဒုတိယအခ်က္က ပညာအားနည္းၿပီး တဏွာေလာဘ လြန္ကဲလို႔ပါ။ တတိယအခ်က္က အရွက္အေၾကာက္မဲ့လို႔ပါ။ မယားငယ္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာေတာ္႐ုံအကုသိုလ္ႀကီး႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ ဒီေလာက္လြတ္လပ္သူေတြ အမ်ားႀကီးထဲကမွ မယားငယ္လုပ္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ ဘာလို႔ဒီနာမည္ဆိုးႀကီးနဲ႔ အရင္းႏွီးလုပ္ၿပီး ကိုယ့္ဘဝေလးကိုယ္ ဖ်က္ဆီးရလဲ ဆိုတာ အေတြးရခက္ပါတယ္။ လူဆိုတာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္တယ္ဆို ။ ဒါဆိုသူတို႔က ဘာလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မသနားဘဲ လူတကာ ကဲ့ရဲ႕တာ မေၾကာက္တာလဲ ။ ေသရင္လဲ အပါယ္ေလးပါးမလြတ္တာ ဘုရားေဟာရွိတယ္မဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ကိုယ့္ကိုကိုယ္အခ်စ္လြန္ေနတာလို႔ ကြၽန္မေတြးမိတယ္။ တကယ္ေတာ့ မိန္းကေလးတခ်ိဳ႕မွာအမူအက်င့္တခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးခံခ်င္စိတ္ပါ။ လူတိုင္းမွာဒီစိတ္ရွိေသာ္လည္း ဘယ္လိုအေျခအေနမွာခ်ီးက်ဴးခံခ်င္တာလဲဆိုတာကြာပါတယ္ … Read more
မြန်မာတို့၏ တလွဲအယူများ … ဘာတွေ ကွာခြားနေတာလဲ???
မြန်မာတို့၏ တလွဲအယူများ … ဘာတွေ ကွာခြားနေတာလဲ??? မြန်မာတို့၏ တလွဲအယူများ အကျိုးအကြောင်း ဆီလျော်အောင် မတွေးတတ်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲသမားတွေ တွေ့တိုင်း ဖတ်ပါ။ အမတော် ‘သုစိတ’ မောင်တော်’နန္ဒ’ အပိုင်စားရတဲ့ မင်းဘူးက နဂါးပွက်အိုင်။ တကယ်တော့ ဂေါပကတွေရော အဲ့ဒီလာတဲ့ နဂါးကို လာဖူးကြတဲ့သူတွေပါ။ ပထဝီ သင်ခဲ့ကြမှာပါ ။ ၅ တန်း ၆ တန်း လောက်ဆို မီးတောင်အကြောင်း စာသင်နေရပြီ။ ရွှံ့မီးတောင် / မီးတောင်သေ / မီးတောင်ငြိမ်း သင်ဖူးကြမှာပါ ။ အခုလို ရွှံ့မီးတောင် အပေါက်ဝထဲကို နွားနို့နဲ့ ကြက်ဥတွေ ပစ်ထည့်ကြတယ်။ အမွှေးတိုင်ပေါင်း သောင်းချီ ပူဇော်ကြတယ် ။ အဲ့ဒီနွားနို့နဲ့ ကြက်ဥတွေကိုသာ မိဘမဲ့ဂေဟာက ကလေးတွေကို … Read more
ထန်းပင်မြစ် ဆိုတာ ထန်းပင်ကြီးရဲ့ အမြစ်လား… မသိသေးသူများ အတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ…
ထန္းပင္ျမစ္ ဆိုတာ ထန္းပင္ႀကီးရဲ႕ အျမစ္လား… မသိေသးသူမ်ား အတြက္ တင္ေပးလိုက္တာပါ… ထန္းပင္ျမစ္ ဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ မသိေသးသူမ်ားက ထန္းပင္ႀကီးရဲ႕ အျမစ္ေတြလို႔ ထင္ေနၾကေတာ့ ရယ္လိုက္ ရေသးတယ္.. ထန္းပင္ႀကီးရဲ႕ အျမစ္ က ႀကီးမား လြန္းလို႔ ႏြားေတြ စားဖို႔အတြက္ ႏြားစာက်င္း (ျမက္ေတြ ထည့္ေကြၽးတဲ့ ခြက္ႀကီး) ေတြေတာင္ ထြင္းလို႔ ရပါတယ္။ စားလို႔ ရတဲ့ ထန္းပင္ျမစ္က ထန္းသီး အရင့္ ေတြကို ေျမျမဳပ္ထားပီး ထြက္လာတဲ့ ထန္းပင္ေပါက္ပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ ယာေတာသူတို႔ စားေနတဲ့ ပဲပင္ေပါက္ လို ဘဲေပါ့… အာ့တာကို မစားရင္ ထန္းပင္ႀကီး ျဖစ္လာမွာေပါ့ေလ။ သူ႔ အရသာ က ႏုလြန္းရင္ ခါးသက္သက္ ျဖစ္တတ္ပီး… … Read more
အမေ အဆင်ပြေပါတယ်သားရယ် ဆိုတဲ့ အဖွားအိုတစ်ဦးရဲ့အဖြစ်
အမေ အဆင်ပြေပါတယ်သားရယ် ဆိုတဲ့ အဖွားအိုတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ် အမေ… ဘာလဲ သား အိမ်မှာက လူတွေလည်း များလာပြီ။ အမေ့မြေးတွေက လူကြီးတွေ ဖြစ်လာတော့ သူ့အခန်းလေးနဲ့သူ နေချင် လာကြပြီ အမေ… အသက် ၈၀ ကျော် ဒေါ်မြရွှေက ဆန်ပြုတ်လေးသောက်နေရာမှ ပန်းကန်ကို ဖယ်လိုက်ပြီး သားက ဘာလုပ်ချင်လို့လဲကွယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေါ့ ဒီအိမ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ တိုက်သစ်ဆောက်ချင်တယ်အမေ… အိုကွယ် … ဒီအိမ်က မင်းအဖေ လစာ တစ်လ ၇ ကျပ်ခွဲရကတည်းက စုဆောင်းပြီး ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ပါကွယ်။ မိဘ လက်ငုတ်လက်ရင်းဆိုတာ မဖျက်ကောင်းပါဘူး။ ပြီးတော့ မင်းအဖေက သားစဉ် မြေးဆက် နေနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ တစ်အိမ်လုံးကို ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုးတွေနဲ့ ဆောက်ထားတာဆိုတော့ နေလို့ ရနေသားပဲ … Read more
အိမ်ခန်းထဲမှ မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်များ ရှင်းလင်းနည်း
အိမ်မှာနေရတာ ငြီးစီစီကြီး၊ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ သင်ခံစားနေမိပါသလား။ အိမ်ထဲမှာ သင်မမြင်နိုင်တဲ့ မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေတစ်ခါတစ်ရံရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒါကိုဖျက်ပြီး နေချင်စရာကောင်းတဲ့အိမ်လေးဖြစ်ဖို့ အောက်ပါရိုးရှင်းတဲ့နည်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရယ်၊ ဆားရယ်၊ ဗီနီဂါရည်ရယ်ပဲလိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖန်ခွက်ထဲ ဆားအနည်းငယ်၊ ရေအနည်းငယ်ရယ်၊ဗီနီဂါရည်အနည်းငယ်ကို ရောထည့်ပြီး အိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ခန်းဖြစ်ဖြစ် သင်အလိုရှိတဲ့နေရာမှာထားထားပါ။ တစ်ရက်ကြာအောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၄နာရီပြည့်တဲ့အခါ ဖန်ခွက်ကိုပြန်လာစစ်ပါ။ ဆားအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဆားတွေက အပေါ်ကို တက်နေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရေလျှံကျနေမယ်ဆိုရင် အဆိုပါနည်းလမ်းအတိုင်း ထပ်မံပြုလုပ်ပြီးထားပါ။ ဆားတွေအပေါ်တက်တာရပ်တဲ့အထိ ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထဲလူမမြင်တဲ့နေရာမှာထားရင် မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေ စုပ်ယူပေးပြီး အိမ်မှာနေရတာ ပိုပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါပေတယ်။ crd Zawgyi အိမ္မွာေနရတာ ၿငီးစီစီႀကီး၊ တစ္မ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေနတယ္လို႔ သင္ခံစားေနမိပါသလား။ အိမ္ထဲမွာ သင္မျမင္ႏိုင္တဲ့ မေကာင္းတဲ့အေငြ႕အသက္ေတြတစ္ခါတစ္ရံရွိေနတတ္ပါတယ္။ဒါကိုဖ်က္ၿပီး ေနခ်င္စရာေကာင္းတဲ့အိမ္ေလးျဖစ္ဖို႔ ေအာက္ပါ႐ိုးရွင္းတဲ့နည္းကို သုံးႏိုင္ပါတယ္။ နည္းလမ္းကေတာ့ … Read more
နွေဦးဂုရု​လေးများပညာ​ရေးစင်တာ Learning Skills များကို လက်တွေ့အသုံးချသင်ကြားပေးနေ
စစ်ရှောင်ကလေးငယ်များ တက်ရောက်သည့် နွေဦးဂုရု​လေးများပညာ​ရေးစင်တာ Learning Skills များကို လက်တွေ့အသုံးချသင်ကြားပေးနေ ကျော်ဇော/People’s Spring ကရင်နီဒေသ(ကယား)ရှိ စစ်ရှောင်ကလေးငယ်များအား ပညာသင်ကြားပေးနေသည့် နွေဦးဂုရုလေးများပညာရေးစင်တာသည် Learning Skills များကို လက်တွေ့အသုံးချ၍ သင်ကြားပေးနေကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန် သည်။ သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်များအနက် ရပ်ရွာရှိကိစ္စရပ်များကို ကွင်းဆင်း​လေ့လာရင်း Learning Skills များကိုလက်​တွေ့အသုံးချ ​လေ့ကျင့်ခြင်း အစီအစဥ်တစ်ခုလည်းပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ “ရပ်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်​တောပြုန်းတီးမှုနှင့် ရာသီဥတု​ဖောက်ပြန်ခြင်းအ​ကြောင်းအရာကို ​ယခုသင်ကြား​ရေးအစီအစဥ်အတွက် ​ရွေးပါတယ်။ လက်​တွေ့လုပ်​ဆောင်ရင်း သင်ယူဖြစ်ကြတဲ့ Learning skills ​တွေက​တော့ Presentation skill, Problem Tree နဲ့ Mind Mapping နည်းလမ်း​တွေကို အသုံးပြု​ရင်း လေ့လာကြပါတယ်”ဟု နွေဦးဂုရုလေးများ ပညာရေးစင်တာက အသိပေးသည်။ ထိုသင်ကြား​ရေး အစီအစဥ်ကို အပတ်စဥ် တနဂ်နွေည​နေပိုင်းတွင် … Read more
စမိုင်းလ်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်မသိသူမရှိအောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ စီးပွားလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ သူမတို့မိသားစုဟာလက်ရှိအမေရိကားမှာနေထိုင်နေတာပါ။ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့လည်းအမြဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာပါ။ ဘဝကိုခက်ခဲစွာကျော်ဖြတ်ရင်းအခုမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေမလုပ်လိုက်ရတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာပါ။ လေယာဥ်စင်းလုံးငှားပြီးလည်းခရီးလေးတွေထွက်လေ့ရှိတာပါ အခုမှာလည်းသူတို့မိသားစုလေးဟာခရီးထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဥ်ပေါ်ကဆင်းဆင်းခြင်းမှာတင် vvipတွေ့လိုဘေးကနေ လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့video လေးကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ စမိုင္းလ္ဆိုတာနဲ႔ပရိသတ္မသိသူမရွိေအာင္ျမင္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ စီးပြားေလာကမွာေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ပရိသတ္ေတြအားက်ေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစုဘဝေလးကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားတာပ သူမတို႔မိသားစုဟာလက္ရွိအေမရိကားမွာေနထိုင္ေနတာပါ။ မိသားစုစုံစုံလင္လင္နဲ႔လည္းအၿမဲေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတာပါ။ ဘဝကိုခက္ခဲစြာေက်ာ္ျဖတ္ရင္းအခုမွာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြမလုပ္လိုက္ရတာေတြကိုျဖည့္ဆည္းေနရင္းဘဝကိုျဖတ္သန္းေနတာပါ။ ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားၿပီးလည္းခရီးေလးေတြထြက္ေလ့ရွိတာပါ။ အခုမွာလည္းသူတို႔မိသားစုေလးဟာခရီးထြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကဆင္းဆင္းျခင္းမွာတင္ vvipေတြ႕လိုေဘးကေန လိုက္လုပ္ေပးေနတဲ့video ေလးကိုလည္းပရိသတ္ေတြအတြက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ Crd စမိုင်းလ်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်မသိသူမရှိအောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ စီးပွားလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ သူမတို့မိသားစုဟာလက်ရှိအမေရိကားမှာနေထိုင်နေတာပါ။ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့လည်းအမြဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာပါ။ ဘဝကိုခက်ခဲစွာကျော်ဖြတ်ရင်းအခုမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေမလုပ်လိုက်ရတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာပါ။ လေယာဥ်စင်းလုံးငှားပြီးလည်းခရီးလေးတွေထွက်လေ့ရှိတာပါ အခုမှာလည်းသူတို့မိသားစုလေးဟာခရီးထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဥ်ပေါ်ကဆင်းဆင်းခြင်းမှာတင် vvipတွေ့လိုဘေးကနေ လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့video လေးကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ စမိုင္းလ္ဆိုတာနဲ႔ပရိသတ္မသိသူမရွိေအာင္ျမင္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ စီးပြားေလာကမွာေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ပရိသတ္ေတြအားက်ေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစုဘဝေလးကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားတာပ သူမတို႔မိသားစုဟာလက္ရွိအေမရိကားမွာေနထိုင္ေနတာပါ။ မိသားစုစုံစုံလင္လင္နဲ႔လည္းအၿမဲေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတာပါ။ ဘဝကိုခက္ခဲစြာေက်ာ္ျဖတ္ရင္းအခုမွာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြမလုပ္လိုက္ရတာေတြကိုျဖည့္ဆည္းေနရင္းဘဝကိုျဖတ္သန္းေနတာပါ။ ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားၿပီးလည္းခရီးေလးေတြထြက္ေလ့ရွိတာပါ။ အခုမွာလည္းသူတို႔မိသားစုေလးဟာခရီးထြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကဆင္းဆင္းျခင္းမွာတင္ vvipေတြ႕လိုေဘးကေန လိုက္လုပ္ေပးေနတဲ့video ေလးကိုလည္းပရိသတ္ေတြအတြက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ Crd စမိုင်းလ်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်မသိသူမရှိအောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ … Read more
ပရိသတ်ကြီးရေ အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ် သရက်ကင်သည်လေး ဂျမ်းတော ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေ ရုန်းကန်နေသူဖြစ်ပြီး စကားကို အမြန်ပြောရင်းကနေ လူမှုကွန်ယက်ပေါ် မှာ နာမည်ကြီးလာခဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမ်းတောလေးက မွေးချင်း မောင်နှမ (၁၀)ယောက်လုံး ကို သရက်ကင်ရောင်းရင်း ရှာဖွေ ကျွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမ်းတောလေးရဲ့ အမေဖြစ်သူကလည်း မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းလေးကပဲ ကွယ်လွန် သွားခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း ဂရုဏာ သက်နေကြတာပါ။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့မိသားစု စားဝတ်နေရေးလေး အဆင်ပြေအောင် တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက အလှူရှင်တွေ ကစုပြီး ဂျမ်းတော တို့ သားအဖကို သိန်း ၂၀ ကျော်ကို ကိုစည်သူက ကိုယ်စားသွားလှူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမ်းတောလေးလည်း သရက်ကင် … Read more
ဘုန်းကြီး နဲ့ ခွေး မငတ်သေးဘူး (ခေတ်ပျက်ခြင်း/မပျက်ခြင်း နိမိတ်များ)
အောက်တွင် Unicode ဖြင့်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ဘုန္းႀကီး နဲ႔ ေခြး မငတ္ေသးဘူး (ေခတ္ပ်က္ျခင္း/မပ်က္ျခင္း နိမိတ္မ်ား) ၾကက္ေတြ အိပ္တန္းမမွန္ေတာ့ရင္။က်ီးေတြ ညပိုင္းေအာ္ဟစ္ဆူညံၾကရင္။ေခြးေတြ ေန႔/ည အူသံေပးရင္။ေသခ်ာပီ ေခတ္ပ်က္မယ္ဆိုတဲ့ နိမိတ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသတိထားမိၾကရဲ႕လား ? ၾကက္ေတြ အိပ္တန္းမွန္ေနေသးရင္က်ီးေတြ အ႐ုဏ္မတက္ခင္မွာအသံၾကားေနရရင္ေခြးေတြ ေန႔/ညရက္ဆက္အူသံမၾကားရရင္ေခတ္ဆိုတာမပ်က္ေသးဆိုတဲ့ နိမိတ္ပဲ။ ဒါကိုေရွးပညာရွိေတြက ေခတ္ပ်က္ျခင္းနိမိတ္ [ ၃ ]မ်ိဳးဆိုၿပီး ကဗ်ာေလးစီထားခဲ့ၾကျပန္တယ္။ ေရာ – ေခြး၊ ဒု – ၾကက္၊ ဝဂ္ – သတ္၊ တဲ့ ေရာ ေခြး -ဆိုတာကေရာဂႏၲရ ေရာဂါကပ္ေဘးႀကီးတစ္ခုက်ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္တဲ့နိမိတ္တစ္ခုအေနအားျဖင့္ တစ္ေလာကလုံးမွာရွိၾကတဲ့ေခြးေတြဟာ လမ္းမေပၚကိုထြက္ၾကၿပီးေန႔/ညမပ်က္အူေနၾကသတဲ့။ ဒု ၾကက္ -ဆိုတာက ဒုဗၻကၡႏၲရ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကပ္ႀကီးတစ္ခုက်ေရာက္ေတာ့မယ္လွ်င္တဲ့ နိမိတ္အားျဖင့္ တစ္ေလာကလုံးမွာရွိၾကတဲ့ၾကက္ေတြဟာ အိပ္တန္းမမွန္ၾကေတာ့သလိုက်ီးေတြဟာလည္း ေန႔/ညမပ်က္ေအာ္ဟစ္ၿပီးေတာ့ေနၾကသတဲ့။ ဝဂ္ … Read more
ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ စကစ ကျောင်းခန်းထဲမှာ တစ်တော့ဆော့နေတဲ့ ဆရာမ တဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ မူလတန်းကလေးတွေ ရှိတဲ့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံ အပြည့်အစုံဝတ်ထားတဲ့ ဆရာမ တယောက်ဟာ အဆိုတော် ရွှေရည်ဖြိုးမောင်ရဲ့ ကိုယ်ရံတော် သီချင်းအလိုက်နဲ့ အညီ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရမ်းပြီး ကခုန်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်က မူလတန်းကလေးတွေကလည်း တစ်တော့ ကစားနေတာကို သိပြီး လိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ စိုးတာကြောင့် ကျောင်းခန်းထဲကို လက်ကိုင်ဖုန်း ယူခွင့်မပေးထားပါဘူး။ အဲဒီစည်းမျဉ်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ လက်ကိုင်ဖုန်းများ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းက ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more